बजेटपछि कुन रक्सी कति महंगियो ? (सूचिसहित) – Clickmandu
बजेटपछि कुन रक्सी कति महंगियो ? (सूचिसहित)
कमलकुमार बस्नेत २०७६ जेठ १७ गते १६:१० मा प्रकाशित
काठमाडौं । मदिरा अर्थात् रक्सीका पारखीहरुका लागि अर्थमन्त्री युवराख खतिवडाको बजेट सुखद रहेन । मन्त्री खतिवडाले अन्तःशुल्क बढाइदिए । जसकारण रक्सीको मूल्य बढेको छ ।
मदिरा उपयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष मदिरामा अन्तःशुल्क बढाउने गर्छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाको पहिलो र दोस्रो दुबै बजेटले राम्रैसँग अन्तःशुल्क बढायो ।
मदिरामा भएको चर्को अन्तःशुल्कका कारण नेपालमा मदिराको मूल्या निकै उच्च छ ।
रक्सी खाने मान्छेप्रति कठोर बने अर्थमन्त्री, १ लिटरमै रु. १५६० सम्म अन्त:शुल्क लगाए, कुनमा कति ? (सूचिसहित)
रमाइलो कुरा त के छ भने अर्थमन्त्री खतिवडा रक्सी खाँदैनन् । रक्सी खाने मान्छेलाई नखाने मान्छेको तुलनामा नेगेटिभ लिस्टमा राख्छन् ।
खतिवडाले आफ्नो व्यवहारजस्तै कर नीति अबलम्बन गर्दै १ लिटरमै १२१ रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क बढाएका छन् ।
पोहोर साल हार्ड ड्रिङ्स मदिरामा भन्दा सफट् ड्रिङ्स बियरमा बढी अन्तःशुल्क बढाएका खतिवडाले यो वर्ष भने हार्ड ड्रिङ्समै बढी अन्तःशुल्क लगाएका छन् ।
सरकारले स्वेदशी फलफुको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वाइनमा भने आयातित वाइनभन्दा निकै कम अन्तःशुल्क लगाएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो नीति अबलम्बन गरेको हो ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् जौबाट बनेको बियरमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले अन्तःशुल्क बढाएका छन् । यसअघि प्रतिलिटर बियरको १५० रुपैयाँ रहेको अन्तःशुल्क आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले १५ रुपैयाँ बढाएर १६५ रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
अन्तःशुल्क बढेसँगै अब बियर ३० देखि ४० रुपैयाँ महंगो हुने भएको छ । किनभने यसको कच्चापदार्थमा पनि कर बढेकोछ ।
अर्थमन्त्रीले मदिराको मात्रा बढी भएका ह्वीस्कीमा सबैभन्दा धेरै अन्तःशुल्क लगाएका छन् । १५ यूपी शक्तिको ४८.५ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको तयारी मदिरामा प्रतिलिटर १३५ रुपैयाँ र प्रति एलपिलिटर १४४ रुपैयाँले अन्तःशुल्क बढाएका छन् । अन्तःशुल्क बढेसँगै अब यस्तो शक्ति भएको मदिराको बजार मूल्य २०० रुपैयाँभन्दा बढीले बढ्नेछ ।
चुरोट, खैनी-सूर्ती र गुट्खाको मूल्य बढ्यो, अर्थमन्त्रीले केमा कति अन्तःशुल्क बढाए ? (सूचिसहित)
आयातित मदिराको हकमा उल्लेखित दरबन्दीमा तोकिएको हल्कोहलको मात्रामा १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक भएमा नजिकको उच्चदरको दरबन्दी अनुसार अन्तःशुल्क लगाई असूल उपर गरिने अर्थमन्त्रीले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो एक महिनामा नेपाल एयरलाइन्सद्वारा करिब ११ हजार यात्रुको उद्दार
आइतबार ८२ जना थपिए कोरोना संक्रमित, कुल संख्या १६ हजार ८०१ पुग्यो
पेट्रोल पम्पका लागि परेका हजार बढी आवेदन रद्द, निवेदन शुल्क फिर्ता लिन आह्वान
चार वटा ब्रोकरबाट कारोबार गर्न नपाएपछि लगानीकर्ता पुग्ने नेप्से घेर्न, यस्तो छ वाइकोको प्रस्टिकरण